Baarlamaanka Puntland oo ka dooday Xeerka maandooriyaha – Idil News
Baarlamaanka Puntland oo ka dooday Xeerka maandooriyaha
Posted By: Jibril Qoobey November 13, 2021
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Mudane, Cabdirashid Yusuf Jibril oo uu wehliyo Guddoomiye ku xigeenka 2-aad Mudane, Ismaaciil Maxamed Warsame, ayaa maanta shir Guddoomiyey fadhiga 9-aad ee Kalfadhiga 49-aad Golaha Wakiillada DPL.
Ajanadaha kulanka ayaa ahaa ka doodista Wax-ka-bedalka Xeerka Khamriga iyo Xashiishadaha, Xeer Lr. 5 ee 18 – Dec- 2010 kaas oo Guddiga Shuruucda, Cadaaladda, Arrimaha diinta iyo Dastuurka Golaha Wakiillada DPL ku sameeyey wax-ka-bedel iyo kaabis, iyagoo Golaha la wadaagay warbixintooda maanta.
Xildhibaannada Golaha Wakiillada DPL ayaa qodob-qodob uga doodey xeerka, waxayna ansixiyeen Qodobo ka mid ah.
Xeerka oo horay u ahaa Wax-ka-bedalka Khamriga iyo Xashiishadaha, ayaa Guddiga waxa uu bedelay magaca Xeerka waxayna ka dhigeen “ Xeerka La-dagaalanka Maandooriyaha Dawladda Puntland.” waxaana cod aqlabiyad ah ku ogolaaday Xildhibaanadda Golaha Wakiillada.
Xeerka Maandooriyaha Dawladda Puntland oo weli Doodiisa ka socoto Golaha Wakiillada, ayaa reebaya kaanidda, beerista, gacansiinta, isticmaalka iyo ka ganacsiga dhammaan noocyadda Maandooriyaha kaas oo loo isticmaalo sifo kasta oo loo qaato maandooriye sida cabid, qiijin, dhuuqid, shidasho, cunid, isku-durid irbad, ursasho IWM.
Ujeedada xeerka ayaa ah Ilaalinta anshaxa iyo dhaqanka suubaan ee Islaamka, waxaana lagu wadda in doodiisa ay socoto illa maalinta berri ah.